WTTC waxay muujineysaa saameynta weyn ee COVID-19 ee Safarka & Dalxiiska adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » WTTC waxay muujineysaa saameynta weyn ee COVID-19 ee Safarka & Dalxiiska adduunka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Haysashada hab maamuus caafimaad iyo nadaafadeed oo hufan oo isku dubaridan waxay ka taageeri doontaa waaxda dib-u-dhiska kalsoonida socotada waxayna u oggolaan doontaa safarka caalamiga inuu dib u bilowdo oo dhakhso u soo kabto.
Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka wuxuu soo saaray Warbixin cusub ee Isbeddellada Dhaqaalaha.
Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu arkay gobolka Aasiya-Baasifiga oo ay ku dhacday khasaarihii ugu weynaa ee soo gaadhay.
Ameerika kuwa ugu yar, oo ay ku badbaadiyeen dib u soo kabasho xoog leh oo gudaha ah.
Aasiya Baasifigga ayaa ahayd gobolka ugu daran ee uu ku dhuftay CUDURKA-19 faafa sida ku xusan Warbixinta sanadlaha ah ee isbeddellada dhaqaalaha Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC).
Warbixinta ayaa muujineysa saameynta buuxda ee xayiraadaha safarka ee loogu talagalay in lagu xakameeyo COVID-19 dhaqaalaha adduunka, gobollada shaqsiyadeed, iyo luminta shaqadeeda adduunka.
Aasiya-Baasifigga ayaa ahaa gobolka ugu waxqabadka xun, iyada oo qaybta ay ka geysatay waxsoosaarka guud ay hoos u dhacday 53.7%, marka loo eego hoos u dhaca adduunka ee 49.1%.
Kharashaadka booqdayaasha caalamiga ah ayaa si gaar ah loogu waxyeeleeyay guud ahaan Aasiya Baasifigga, iyadoo hoos u dhacday 74.4%, maadaama dalal badan oo kuyaala gobolka ay xireen xuduudahooda si ay usoo galaan dalxiisayaasha. Kharashka ku baxa gudaha wuxuu arkay hoos u dhac hoose laakiin si siman u ciqaabaya 48.1%.
Shaqada Safarka & Dalxiiska ee gobolka ayaa hoos u dhacday 18.4%, taas oo u dhiganta 34.1 milyan oo shaqo oo naxdin leh.
Si kastaba ha noqotee, inkasta oo hoos u dhacani, Aasiya-Baasifigga ayaa weli ah gobolka ugu weyn ee shaqaalaynta qaybta 2020, oo ka dhigan 55% (151 milyan) dhammaan shaqooyinka caalamiga ah ee Safarka & Dalxiiska.
Virginia Messina, Madaxweyne Ku Xigeenka WTTC, waxay tiri: “Xogta WTTC waxay banaanka soo dhigtay saameynta ba’an ee uu aafada ku yeeshay Safarka & Dalxiiska aduunka oo dhan, taasoo ka dhigeysa in dhaqaalahiina ay sii xumaadaan, malaayiin shaqo la’aan ah iyo inbadan oo kale oo ka baqaya mustaqbalkooda.
“Warbixinteena sanadlaha ah ee isbeddelada dhaqaalaha waxay muujineysaa sida ugu badan ee gobol walba uu kala kulmay gacmaha xayiraadaha safarka ee la keenay si loo xakameeyo faafitaanka COVID-19.
Dalxiiska Seychelles iyo Qatar Airways ayaa Wadaaga Cusub ...
Goobaha ugu wanaagsan ee loo aado caasimadaha aduunka ee Maraykanka...
Maalgelinta, Maaliyadda & Dib-u-bilawga: Maalgelinta Dalxiiska...